Caro ka dhalatay markii "bukaan qabay cudurka Aids-ka xoog looga saaray isbitaal" - Somali
Caro ka dhalatay markii "bukaan qabay cudurka Aids-ka xoog looga saaray isbitaal"
Zimbabwe oo malaayin doolar kasoo deynsaneyso Hindiya si ay u daboosho baahinda korontada
Tanzania oo baareysa shilkii dadka badan ay ku dhinteen
Trump oo bartilmaameedsanaya muhaajiriinta saboolka ah ee sida sharciga ah ku joogo Mareykanka
Tijaabo muujineyso in la daweyn karo cudurka Ebola
In ka badan 300 qof oo lagu eedeeyay ugaarsiga Wiyisha oo lagu xiray Koonfur Afrika
Posted at 9:35 16 Aug9:35 16 Aug
Hogaamiyaha Shiicada Nigeria oo kasoo ambabaxay Hindiya isagoo aanan wax adeeg caafimaad ah helin
Ibraahim ZakzakyImage caption: Ibraahim Zakzaky
Hogaamiyaha Shiicada Nigeria Ibraahim Zakzaky oo xaalad caafimaad u joogay dalka Hindiya ayaa lagu soo warramaya in uu kasoo ambabaxayo Delhi si uu dib ugu soo laabto Nigeria kaddib markii muddo saddex maalmood uu joogay halkaas.
Waxaana lagu soo warramaya in wax daweyn ah uusan helin.
Ibraheem Zakzaky iyo xaaskiisa Zenaat ayaa in muddo xirnaa waxaana dhawaan xabsiga laga sii daayay xabsi oo loo ogolaaday in xaalad caafimaad dalka dibaddiisa loogu qaado.
Hogaamiyaha Shiicada dalka Nigeria ayaa la xanuunsan sunta maadada Lead-ka oo jirkiisa saameysay kaddib markii ay ku dhacday rasaas, sida gabadh uu dhalay ay u sheegtay BBC.
Waxay intaas ku dartay in aabaheed ay isha kaga jirto sunta isla markaasna uu maray qalliin si looga saaro.
Ibraahim, waxaa uu ka xumaaday ciidammada ilaalinayo ee kula sugan isbitaalka maadama uusan helin karin dhaqaatiirta uu isaga damco ee daweyn laheyd.
Posted at 8:50 16 Aug8:50 16 Aug
Mucaaradka Suudaan oo soo xushay ra'iisul wasaare kumeel gaar ah
Hamdok wuxuu muddo ka badan 30 sanno ah uu ahaa sarkaal sare oo falanqeeyo dhaqaalaha iyo siyaasaddaImage caption: Hamdok wuxuu muddo ka badan 30 sanno ah uu ahaa sarkaal sare oo falanqeeyo dhaqaalaha iyo siyaasadda
Mucaaradka Suudaan ayaa xilka ra’iisul wasaaraha usoo xushay sarkaal sare oo horey uga tirsanaa Qaramada Midoobey, Cabdalla Hamdok si uu matalo dhinaca mucaaradka dowladda kumeel gaarka ah ee saddexda sanno jiri doonto.
Hamdok oo ah dhaqalyahan ayaa sannadkii lasoo dhaafay iska casilay xilkii uu ka hayay guddiga dhaqaalaha ee Qaramada Midoobey ee qaabilsan qaaradda.
Golaha sare ee miitariga Suudaan iyo mucaaradka ayaa lagu wadaa in Sabtida ay gaaraan heshiis kama dambeys ah oo lagu dhisayo dowlad kumeel gaar ah.
Sannadkii lasoo dhaafay Hamdok waxaa uu madaxweynihii dalka Suudaan, Cumar Al Bashiir u magacaabay xilka wasiirka maaliyadda balse xilkaas waa uu diiday inuu qabto, sida ay ku warrantay wakaaladda wararka ee AFP.
“Waxaan u rajeyneynaa Hamdok guul weyn xilli dalka uu ku jiro xaalado adag sida ku xusan taarikhda dalka iyo dadka, waa xilli dadweynaha isbaddal-doonka Suudaan ay rajo weyn muujinayaan” ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay ururka xirfaladyaasha Suudaan oo horkacayay kacdoonkii ka dhacay Suudaan, sida ay ku warrantay wakaaladda wararka ee Reuters.
Dalka Suudaan waxaa ka dhacay dibadbaxyo ballaaran oo horseeday in xukunka laga tuuro madaxwenihii hore ee dalkaas Cumar Xasan Al Bashiir.
Posted at 6:11 16 Aug6:11 16 Aug
Duqa magaalada London oo la kulmay wiilka Cabdiraxmaan Yariisow
Duqa magaalada London, Sidiiq Khan ayaa la kulmay wiilka Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan oo ahaa guddoomiyihii gobolka Banaadir oo dhawaan u geeriyooday dhaawac kasoo gaaray qarixii ka dhacay dhismaha maamulka Banaadir.
Sadiiq Khan waxaa uu tacsi u diray dhammaan eheladii uu ka geeriyooday Injineerka.
Waxaa uu sidoo kale la kulmay qurba joogta soomaalida ee ku sugan London isla markaasna waxaa uu ka hadlay doorka bulshada Soomaalida ay ku leeyihiin horumarada dalkaas.
Geerida Injineer Yariisow: Waa kuma Guddoomiyihii Gobolka Banaadir?
Duqa Magaalada Muqdisho, Cabdiraxmaan Cumar Cismaan wuxuu Siyaasadda Soomaaliya ku lug lahaa ku dhowaad 15kii sano ee ugu dambeysay.
Posted at 5:13 16 Aug5:13 16 Aug
Sraakiisha dalka Masar ayaa baarayaa arrin ka dhacday Isbitaal ku yaalla dalka Masar kaddib markii qof bukaan oo qabay cudurka Aids-ka xoog looga saaray halkaas.
Isbitaalka ayaa ku yaalla deegaanka Gharbia, waxay dhacdan caro weyn ka dhalisay baraha bulshada kaddib markii muuqaallo iyo sawirrada lagu baahiyay baraha bulshada.
Waxay muujinayaan muuqaallada ninka oo xoog looga saarayo isbitaalka isla markaasna lagu jiidayo dhulka.
Wasaaradda caafimaadka Masar waxay sheegtay in shaqaalaha Isbitaalka lagala xisaabtamayo dhibaatada loo geystay bukaanka qabay cudurka Aids-ka ee xaaladda caafimaad u jiifay halkaas.
Bukaanada qaba cudurka Aids-ka ee kunool Masar ayaa waxay takoor kala kulmaan bulshada.
Posted at 5:11 16 Aug5:11 16 Aug
Kulanti wacan akhyaarta halkan nagala socotaay kusoo dhawaada tebinta ah tooska ah oo aan idiin kuugu soo gudbinno wararkii ugu dambeeyay soomaalida iyo caalamka.
Waa Jimco taarikhda waxay ku beegan tahay 16-ka bisha Agoosto sannadka 2019.
Posted at 8:48 15 Aug8:48 15 Aug
Ibrahim Zakzaky waxaa uu xirnaa muddo afar sanno ahImage caption: Ibrahim Zakzaky waxaa uu xirnaa muddo afar sanno ah
Hogaamiyaha Shiicada dalka Nigeria oo xaalad caafimaad u joogo dalka Hindiya ayaa la xanuunsan sunta maadada Lead-ka oo jirkiisa saameysay kaddib markii ay ku dhacday rasaas, sida gabadh uu dhalay ay u sheegtay BBC..
Waxaa isbitaalka ku sugan ciidammo boolis ah oo ilaalinayo.
Ibrahim Zakzaky ayaa kamid ahaa boqolaal ka tirsan Shiicada Nigeria oo xabsiga loo taxaabay sanadkii 2015-kii kaddib markii ay rabshado dhexmareen taageerayaashiisa iyo booliska dalkaas, waxaana rabshadahaas ku dhintay 350 qof.
Wadaadka iyo xaaskiisa ayaa in muddo xirnaa waxaana dhawaan xabsiga laga sii daayay oo loo ogolaaday in xaalad caafimaad dalka dibaddiisa loogu qaado.
Gabadha uu dhalay wadaadka, Suheyla Zakzaky ayaa sheegtay in sunta ay ku baahday jirkiisa kaddib markii rasaas ciidammada militariga Nigeria ay ku fureen gurigiisa sanadkii 2015-kii.
Posted at 6:34 15 Aug6:34 15 Aug
Kooxaha fallaagada Suuriya oo soo riday diyaarad ay leedahay dowladda
Dagaalyahanada mucaaradka oo soo bandhigay burburka diyaaraddaImage caption: Dagaalyahanada mucaaradka oo soo bandhigay burburka diyaaradda
Diyaarad ay leedahay xukuumadda Suuriya ayaa lagu soo warramaya in la soo riday markii uu dagaal ka dhacay deegannada ay mucaaradka ku xooggan yihiin ee dhaca gobolka Idlib.
ilo wareedyo taabacsan mucaaradka waxay sheegeen in diyaaradda lagu soo riday meel u dhaw magaalada Khan Sheikhoun.
Warar horraan soo baxayay, waxay sheegayaan in ciidammada Suuriya oo taageero ka helayo Ruushka ay gaareen meel u dhaw goobta uu dagaalka ka dhacay.
Ku dhawaad 30 dagaalyahan ayaa ku dhintay dagaalka shalay ka dhacay halkaas.
Kooxda dusha kala socoto xaaladda xuquuqda aadanaha Suuriya ee uu fadhigeedu yahay UK ayaa ku warrantay in duuliyihii saarnaa diyaaradda ay gacanta ku hayaan kooxda Taxriir Al Shaam ee ku xooggan gobolka Idlib.
Dowladda Suuriya waxay bilooyinkii ugu dambeeyay wadday dagaal kooxaha fallagada looga saarayo gobolka Idlib, waxaana taageeraya diyaaradaha dagaalka ee Ruushka.
Boqolaal qof ayaa lagu dilay gobolka halka boqolaal kun ay ka qaxeen guryahoodii.
Posted at 5:57 15 Aug5:57 15 Aug
Mareykanka oo cunaqabateyn kusoo roggay madixii hore ee sirddoonka Suudaan
Saalax Gosh ayaa xilka iska casilay saacado un kaddib markii la afgembiyay Cumar Al BashiirImage caption: Saalax Gosh ayaa xilka iska casilay saacado un kaddib markii la afgembiyay Cumar Al Bashiir
Mareykanka ayaa cunaqabateyn kusoo roggay madaxii hore ee ciidammada sirddoonka Suudaan Saalax Gosh oo lagu eedeeyay inuu ku lug lahaa tacaddiyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha oo ka dhacay dalkaas,
Cunaqabateynta ayaa ah in Saalax Gosh uusan u safri karin Mareykanka.
Bayaan kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa lagu sheegay in la hayo caddeymo muujinayo in Gosh uu ku lug lahaa dhacdooyin lagu dhibaateeyay dad rayid ah markii uu ahaa madaxii ciidammada sirddoonka Suudaan.
Saalax Gosh waxaa uu xilkan hayay xilliggii dalka ka talinayay madaxweynihii xilka laga tuuray ee Suudaan Cumar Al Bashiir.
Posted at 5:38 15 Aug5:38 15 Aug
CABDIXAKIIN BIIFCopyright: CABDIXAKIIN BIIF
Dukaamada dhaca loo geeystayImage caption: Dukaamada dhaca loo geeystay
Warar aan ka helnay deegaanka Soweto ee magaalada Johannesburgee dalka Konfur Afrika ayaa sheegaya in gelinkii dambe ee shalay ilaa xalay, halkaasi boob,dhac iyo dhawacaba, loogu geeystay Soomaalida ganacsatada ah,waxaa boob loo geestay boqolaal dukaan, sida uu BBC sheegay Cabdixakiim Biif oo ku sugan halkaas.
Arrintan ayaa la sheegay inay ka dhalatay kadib markii ay isku dhaceen ganacsade iyo macamiilkiisa isla markaasna ay ka caroodeen dadka degaanka.
Cabdixakiin Ibraahim oo ku magac dheer Cabdixakiin Biif,oo dhacdadaasi uga waramay BBC-da ayaa sheegay inuu arkay, Soomaali iyo Itoobiyaan ganacsato ah uu dhaawac kasoo gaaray iska hor imaadkaas.
‘’waxaa bililiqo loo geeystay dhaamaan dukaanadoodi iyagoo ay geesteen dadka u dhashay deegaankaa” ayuu yiri CabdiXakiin
Waxaa dalka Koonfur Afrika horey uga dhacay dhacdooyin noocan ah oo ku saleysan ajaanib naceybka oo ay dad badan dhibaato kasoo gaartay.
Posted at 5:31 15 Aug5:31 15 Aug
Waa Khamiis taarikhda waxay ku beegan tahay 15-ka bisha Agoosto sannadka 2019.
Posted at 11:21 14 Aug11:21 14 Aug
Dad ku dhintay fatahaado ku dhuftay Suudaan
Toddobo qof ayaa ku dhintay roobab mahiigaan ah oo ka da'ay gobolka Al Jaziirah ee dalka Suudaan, sida ay ku warrantay wakaaladda wararka ee dowladda ee Suna.
"Toddobo qof ayaa ku dhintay halka 2 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen dhibaatooyinka ka dhashay roobabka xooggan ee ka da'ay gobolka Jaziirah" ayaa lagu yiri warbixinta.
Tiro shacab ah ayaa ka qaxay guryahooda markii ay daadad ku dhufteen halkaas.
Waxaana barta Twitter-ka lasoo geliyay sawirrada deegaanada ay daadadku ku dhufteen.
Barasaabka gobolka Jaziirah, Janaraal Axmed Hanan Axmed Subeyr ayaa sheegay inay gargaar u fidinayaan dadka ka qaxay fataahadaha.
Boqolaal qof ayaa sidoo kale ka barakacay fatahaado ku dhuftay magaalada Khartuum, sida ay ku warrantay wakaaladda wararka ee AFP.
Posted at 8:28 14 Aug8:28 14 Aug
Uganda oo shacabkeeda u qeybineyso Maro Kaneeco laga bilaabo sannadka soo socdo
Wasaaradda caafimaadka dalka Uganda waxay sheegtay in hal milyan oo qof oo ku nool dalkaas uu ku dhacay cudurka Duumada labadii bilood ee lasoo dhaafay.
Saraakiisha dowladda waxay sheegeen in isticmaal la’aanta maro kaneecada iyo roobabkii mahiigaanka ee ka da’ya dalkaas bishii June ay horseedeen Duumada.
Waxay dowladda sheegtay in 38 milyan oo maro kaneeca ah ay u qeybiyeen shacabka dalkaas intii u dhexeeysay bishii Febraayo ee sannadkii 2017-kii iyo bishii Maarso ee sannadkii 2018-kii.
“Maro kaneecada waxaa la sameeyay saddexdii sanno ee lasoo dhaafay, nasiib darro waxaa jiro wax isdabo marin iyo qaar kamid ah Maro kaneecooyinka la lunsaday” ayuu yiri Jimmy Opigo oo ah ku-xigeenka guddoomiyaha laanta qaran ee la dagaalanka Duumada.
“Waxaan kaashaneynaa deeq bixiyeyaasha, laba bilaabo bisha Febraayo ee sannadka dambe waxaan shacabka u qeybineynaa mara kaneecooyin hor leh” ayuu yiri Jimmy.
Posted at 7:49 14 Aug7:49 14 Aug
Dad ka badbaaday cudurka Ebola
Labada qof ee ka badbaaday EbolaImage caption: Labada qof ee ka badbaaday Ebola
Labo qof oo laga daweeyay cudurka Ebola kaddib markii ay qaateen dawooyin tijaabo ah ayaa dib ula midoobay qoysaskoodii kuwaaso oo lagu hayay xarun ku taalla bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo.
Dadkan waxay kamid ahaayeen koox bukaan ah oo ku sugnaa magaalada Goma kuwaas oo lagu tijaabiyay dawooyinka.
Dhaqaatiirta waxay ku rajo weyn yihiin in dhawaan dawo loo heli doono Ebola.
Posted at 5:44 14 Aug5:44 14 Aug
Madaxweynaha Nigeria oo ku baaqay in la joojiyo cuntooyinka laga soo dhoofiyo dibadda
Muhammadu Buhari wuxuu ballan qaaday xoojinta wax soo saarka beerahaImage caption: Muhammadu Buhari wuxuu ballan qaaday xoojinta wax soo saarka beeraha
Madaxweynaha Nigeria Muhammadu Buhari ayaa amar ku siiyay bangiga dhexe ee Nigeria inuu horjoogsado cid kasta oo dalka soo gelineyso cuntooyinka laga keeno dibadda.
Waxaa uu tallaabadan uga golleeyahay madaxweynaha in la xoojiyo wax soo saarka beeraha dalkaas.
Muhammadu Buhari waxaa uu sheegay in arrintani uu doonayo in la dardargeliyo isku filnaanshaha dhanka wax soo saarka cuntooyinka Nigeria isla markaasna si looga kaaftoomo soo dhoofinta badeecadaha dalalka shisheeye.
Waxaa uu faray bangiga dhexe ee Nigeria “In hal shilin ah aanan la siin qof kasta oo doonayo in dalka uu soo geliyo cuntooyinka laga keeno dalka dibaddiisa”
Bangiga dhexe ee Nigeria waa mid madaxbanaan balse ma kala cadda sida uu raaci doono go'aanka kasoo baxay madaxweynaha.
Nigeria waa dalka ugu dhaqaalaha xooggan qaaradda balse 200 milyan qof oo ka tirsan shacabka dalkaas ayaa ku tiirsan cuntooyinka laga soo dhoofiyo dalalka dibadda.
Madaxweyne Buhari oo mar labaad lasoo doortay sannadkan ayaa waxaa uu ballan qaaday inuu xoojin doono dhaqaalaha dalkaas.
Posted at 5:34 14 Aug5:34 14 Aug
Waa Arbaco taarikhda waxay ku beegan tahay 14-ka bishan Agoosto sannadka 2019.
Posted at 10:25 13 Aug10:25 13 Aug
Maalqabeen u dhashay Israa'iil oo loo heysto eedeymo ah inuu bixiyay laaluush
Beny Steinmetz waxaa uu beeniyay eedeymaha loo jeediyayImage caption: Beny Steinmetz waxaa uu beeniyay eedeymaha loo jeediyay
Maalaqabeen u dhashay Israa’iil oo lagu magacaabo Beny Steinmetz iyo labo qof oo kale ayaa hortaggaya maxkamad ku taalla dalka Switzerland sii loo dhageysto eedeymo laaluush ah oo loo heysto, sida laga soo xigtay dacwad oogaha.
Ninkan iyo saaxibadiis waxaa lagu eedeeyay inay 10 milyan oo doolar ay laaluush ahaan u siiyeen labo shirkadood oo macddanta qaabilsan oo ay leedahay dowladda Guinea si loo siiyo sharciga u ogolanayo in howlaha macaddan qodista ay ka sameyn karaan dalkaas.
Bayaan kasoo baxay dacwad oogaha Geneva, Claudio Mascotto ayaa lagu sheegay in lacagta laaluushka ah lagu heshiiyay inay bixiyaan sannadkii 2005-kii ka hor inta uusan geeriyoon madaxweynihii Guinea, Lansana Conte, sida ay ku warrantay wakaaladda wararka ee Reuters.
Waxaana raggan lagu eedeeyay inay qorsheynayeen in lacagahan laaluushka ay siiyaan xaaskii madaxweynihii Guinea ee xilliggaas si qanddaraas macddan qodis ah looga siiyo shirkaddii Beny Steinmetz gobolka Simandou ee dalkaas.
Sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee AFP, dacwad oogaha waxaa uu sheegay in qaar kamid ah lacagta ay ku bixiyeen akoonno ay ku lahaayeen bangiyo ku yaalla Switzerland.
Maalqabeenkan u dhashay Israa’iil waxaa uu horraan beeniyay eedeymaha loo jeediyay.
BIshii Febraayo ee sannadkan, mas’uuliyiinta dalka Guinea waxay meesha ka saareen eedeymaha musuq maasuq ee loo heystay Steinmetz kaddib markii shirkaddiisa lagala noqoday ruqsaddii ay macddan qodista uga sameyneysay gobolka Simandou.
Balse maxkamadda ku taalla Geneva ayaa waxay waddaa baaritaanno la xiriira arrintaas.
Posted at 9:49 13 Aug9:49 13 Aug
War deg deg ahDuulimaadyada gegida diyaaradaha Hong Kong oo maalintii labaad la hakiyay
Hong Kong airport suspends flights for a second day because of anti-government protests.
Waxaa mar labaad hakad galay duulimaadyadii garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Hong Kong kaddib markii halkaas ay hareeyeen dibadbaxyada looga soo horjeedo dowladda.
Kumanaan qof ayaa dibadbaxyo ka dhigayay garoonka diyaaradaha Hong Kong maalmihii lasoo dhaafay, waxaa uu garoonka kamid yahay meelaha ugu mashquulka badan caalamka.
Posted at 9:10 13 Aug9:10 13 Aug
Waxaa dalka Koonfur Afrika lagu qabtay 366 qof oo looga shakisan yahay inay ku howlanaayeen ugaarsiga sharci darrada ah ee xayawaanka Wiyisha tan iyo sannadkii lasoo dhaafay, sida laga soo xigtay warbaahinta News24 oo soo xiganeyso wasiirka deegaanka ee dalkaas.
Shan iyo toban kamid ah dadkan la xiray waxay kamid yihiin shaqaalaha seeraha duurjoogta ee Kruger.
Halka 7 qof oo kale lagu xiray seerayaasha kala ah Pilanesberg iyo Motala, sida ay sheegtay wasiirka arrimaha deegaanka ee Koonfur Afrika.
Posted at 8:47 13 Aug8:47 13 Aug
In ka badan 1,800 qof ayaa u geeriyooday cudurka Ebola ee ka dillaacay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee CongoImage caption: In ka badan 1,800 qof ayaa u geeriyooday cudurka Ebola ee ka dillaacay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo
Tijaabo la sameeyay ayaa muujineysa in la daweyn karo bukaanada uu ku dhacay cudurka Ebola, sida dhakhaatiirta ay sheegayaan.
Afar dawooyin ah ayaa waxaa lagu tijiaabiyay buukanada Ebola ee ku sugan dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo halkaas oo uu ka dilaacay.
Darasaadda ayaa lagu xusay in boqolkiiba 90 dawada lagu daweyn karo Ebola.
Wixii hadda ka dambeeyo daawooyinka waxaa lagu daweyn karaa dhammaan bukaanada qabo Ebola, sida ay sheegayaan saraakiisha caafimaadka ee dalkaas.
Macadka ka hortagga xaasaasiyadda iyo cudurada oo maaligelisay daraasadda ayaa waxay ku tilmaantay tallaabo horumar ah oo lagula dagaalamayo Ebola.
Dawooyinkan ayaa lagu kala magacaaba REGN-EB3 iyo mAb114.
Posted at 6:29 13 Aug6:29 13 Aug
'Labo baarlamaan oo iska soo horjeedo oo looga dhawaaqay Jubaland'